Ministry of Education ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန | ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်ငံတကာ The Victims of the Holocaust အမှတ်တရနေ့အခမ်းအနား အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားရာတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား Holocaust ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသူများအတွက် အထူးဝမ်းနည်းကြောင်း ဦးစွာပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပသော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးက Holocaust ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသူ များအတွက် နိုင်ငံတကာ Holocaust အမှတ်တရနေ့အခမ်းအနားများကို ကျင်းပကြရန် ဆုံးဖြတ် တိုက်တွန်းခဲ့ပါကြောင်း၊
နိုင်ငံတကာ Holocaust အောက်မေ့ဖွယ်နေ့အခမ်းအနားများတွင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီများ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် မှုကြောင့် ဂျူးလူမျိုး ၆ သန်းနှင့် အခြားလူမျိုးများ သေဆုံးခဲ့ရမှုအကြောင်းကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါကြောင်း၊ အတွေ့အကြုံ များအရ နာဇီများက ဂျူးလူမျိုးများကို မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးနှင့် တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းသားများ၏စိတ်တွင် စွဲမြဲသွား စေရန် ရည်ရွယ်ကာ ပညာရေးသင်ခန်းစာများ ပို့ချပေးရန် အရေးကြီးပါကြောင်း၊
ယခုနှစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ခေါင်းစဉ်မှာ “Facing the Aftermath: Recovery and Reconstitution after the Holocaust” ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂက သတ်မှတ်ပေးထားသော အဆိုပါခေါင်းစဉ်သည် Holocaust ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသူများနှင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက် Holocaust ၏ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများကို စိတ်တွင် စွဲထင်စေရန် လိုအပ်ပုံကို သတိပေးနေ ပါကြောင်း၊ Holocaust နှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများကို လူငယ်များအား အသိပညာမျှဝေ ပေးခြင်း၊ သင်ကြားပေးခြင်းတို့ဖြင့် အတိတ်သမိုင်းကို ပိုမိုနားလည်လာစေပြီး သတင်းမှားများနှင့် အမုန်းစကားများဖြင့် လူမျိုးခွဲခြားဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်နှင့် ကြောက်ရွံ့စိတ်များဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံ့ဆော်နေမှုများကို ပြည်သူများ ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
Holocaust အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားများသည် အတိတ်နှင့် အနာဂတ်ကို ချိတ်ဆက်ပေးရာရောက်ပါ ကြောင်း၊ အထူးအားဖြင့် အနာဂတ်တွင် ဤဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မံမပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် တားဆီးရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သတိပေးနေပါကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်၍ Holocaust အောက်မေ့ဖွယ်နေ့အခမ်းအနားများ ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်တို့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပြန်ကြားရေးဌာနတို့တွင် Holocaust အောက်မေ့ဖွယ်နေ့အခမ်းအနားများကို အစ္စရေးသံရုံးနှင့် ပူးပေါင်းကျင်းပလျက်ရှိပါ ကြောင်း၊ ဤအခမ်းအနားများသည်အတိတ်က ကြောက်မက်ဖွယ်ကာလများကို သိမြင်နားလည် အောင် ပညာပေးနိုင်သကဲ့သို့ ကွဲပြားခြားနားသော လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ တိုင်းပြည်များအကြား အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ နားလည်မှုနှင့် ချစ်ခင်မှုတို့ လိုအပ်ပုံကို သိမြင်စေပါကြောင်း၊
လူမျိုး ခွဲခြား ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒကို လုံးဝသည်းခံခွင့်လွှတ်၍မရသောအရာအဖြစ် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကမ္ဘာ့လူသား ကောင်းစိတ်ဓာတ် တို့ဖြင့် ပြန်လည်ချေဖျက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဤသည်မှာ ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော်ရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တာဝန်လည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် Holocaust အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို ပုံစံနှစ်ရပ် ဖြင့် ကျင်းပပါကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများအား Holocaust ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပို့ချချက်ပုံစံနှင့်အတူ ကိုဗစ်ကာလစည်းမျည်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာလျက် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပုံစံဖြင့်လည်း ကျင်းပပါကြောင်း၊ ဤအခမ်းအနားကို ကိုဗစ်ကာလ အကန့်အသတ်များကြားတွင် ကိုဗစ်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး အွန်လိုင်းမှတက်ရောက်ပေးကြပါသော သံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူနှင့် ဆရာ ဆရာမများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းစသည်ဖြင့် ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ United Nations Resident & Humanitarian Coordinator in Myanmar မှ H.E. Mr. Ola Almgren က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Antonio Guterres ၏ သဝဏ်လွှာ ကို ဗွီဒီယိုဖြင့် ပြသသည်။ ထို့နောက် အစ္စရေးသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ronen Gilor ၊ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Thomas Neisinger ၊ ရုရှားနိုင်ငံသံအမတ် H.E. Mr. Nikolay Listopadov နှင့် UNICEF မြန်မာ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် H.E. Ms. June Kunugi တို့က မိန့်ခွန်း ပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ United Nations Resident & Humanitarian Coordinator in Myanmar၊ UNICEF မြန်မာ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်၊ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်တို့က အထိမ်းအမှတ် ဖယောင်းတိုင်မီး ထွန်းညှိခဲ့ကြပြီး ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းပြသခြင်း၊ အမှတ်တရသီချင်း တီးခတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။